MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardယူထား+ ၀န်ဆောင်မှု - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေနည်းနေသည့်အချိန်တိုင်းတွင် MPT ၏ “ယူထား+” ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေရယူ၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ “ယူထား+” ဝန်ဆောင်မှုကို အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့်ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ရန်လွယ်ကူခြင်းမရှိသောအခြေအနေများတွင် *800# ကိုခေါ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
ဇွန်လ ၁၀ ရက် နေ့မှစတင်၍ ချေးငွေအနည်းဆုံးပမာဏ ၈၀၀ကျပ်ကို တစ်လအတွင်း (၁)ကြိမ်သာချေးယူနိုင်ပြီး ၊ ယင်းလအတွင်း နောက်ထပ်ချေးငွေများများရယူရန်အတွက် ပိုမိုများပြားသောချေးငွေပမာဏ ၁၀၀၀ ကျပ်၊ ၁၅၀၀ကျပ်၊ ၂၅၀၀ကျပ် နှင့် ၄၅၀၀ ကျပ်အထိ သင်ရရှိနိုင်သောချေးငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?
USSD code အသုံးပြုပြီး ရယူရန်
MPT4U App အသုံးပြုပြီး ရယူရန်
SMS အသုံးပြုပြီး ရယူရန်
“8000” သို့ 800 ဟုရိုက်၍ SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ချေးငွေရယူသုံးစွဲနိုင်သော ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန် *800# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
၂။ MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုသည့်ရက်မှာ ရက်(၃၀)အထက်ရှိရပါမည်။
၃။ ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် တစ်ခါဖြည့်ထားရပါမည်။
၄။ ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး(၃၀၀၀)ကျပ်ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
၅။ယခင်ချေးယူထားသောချေးငွေအား မပေးဆောင်သေးသော်လည်း သင်ရရှိနိုင်သော ချေးငွေအများဆုံးပမာအထိ အကြိမ်များစွာ ချေးယူနိုင်ပါသည်။
၆။ချေးငွေအနည်းဆုံးပမာဏ ၈၀၀ကျပ်ကိုတစ်လအတွင်း (၁)ကြိမ်သာချေးယူနိုင်ပြီး ၊ ယင်းလအတွင်း နောက်ထပ်ချေးငွေများများရယူရန်အတွက် ပိုမိုများပြားသောချေးငွေပမာဏ ၁၀၀၀ ကျပ်၊ ၁၅၀၀ကျပ်၊ ၂၅၀၀ကျပ် နှင့် ၄၅၀၀ ကျပ်အထိ ပြောင်းလဲ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုမှ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုနိုင်သနည်း?
ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိလာသော ချေးငွေကို MPTဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများမှလွဲ၍)
Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများကို ယူထားဝန်ဆောင်မှုဖြင့်အသုံးပြုလိုပါက…
(၁) MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုသည့်ရက်သည် ရက်(၃၀)နှင့်အထက် ရှိရမည်။
(၂) အနည်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းဘေလ်အသုံးပြုမှု ၃၀၀၀ ကျပ်
၂။ အနည်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းဘေလ်အသုံးပြုမှု ၃၀၀၀ ကျပ်
ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်မှု မရှိစေရန်အတွက် MPT ကနေပြီး ငွေကြိုချေးလို့ရတဲ့ “ ယူထား+ ” ဝန်ဆောင်မှုဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်အသုံးဝင်လှပါတယ်။ အရေးပေါ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ငွေဖြည့်ဖို့ လွယ်ကူစေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။